Wafti Ka Socda Golaha Wakiilada S/land Oo Ka Qaybgalay Shirka Baarlamaanka Wadamada Barwaaqa Sooranka Iyo Fariinta Ay u Gudbiyeen | Marsa News
Wafti Ka Socda Golaha Wakiilada S/land Oo Ka Qaybgalay Shirka Baarlamaanka Wadamada Barwaaqa Sooranka Iyo Fariinta Ay u Gudbiyeen
September 26, 2019 - Written by editor marsan
Hargaisa:(Marsanews) Waftigii uu hogaaminayay gudoomiye ku xigeenka golaha wakiilada somaliland Md, Axmed-yasiin Sheekh Cali Ayaanle ee mudada kooban ku sugnaa wadanka yugandha ayaa maanta si rasmiya uga qaybgalay shirka baarlamaanada, wadamada ka tirsan barwaaqo sooranka.
Shirkan oo ay goob-joognimo kaga qaybgaleen xubnaha waftiga somaliland ee halkaa ku sugnaa, ayaa warqad u gudbiyay gudoomiyaha baarlamaanka Uganda oo isagu ah gudoomiyaha 3aad ee baarlamanka barwaaqo-sooranka.
Dhanka kale waftigan ka socda baarlamanka somaliland ayaa caawa casho sharaf uu u fidiyay gudoomiyaha baarlamanka wadanka Uganda.
Waftigan uu hogaaminayo gudoomiye ku xigeenka golaha wakiilada somaliland, ayaa si aad u saraysa loogu soo dhaweeyay wadankaasi ay booqashada ku joogan, islamarkaana ay kulano kala duwan la qaateen dhigooda ka kala socday wadamada barwaaqo-sooranka iyo waliba madaxda kale ee wadanka Uganda.
Kulamadan uu waftigu la yeeshay madaxda kala duwan ayaa guud ahaan ba uu ka soo shaqeeyay wakiilka somaliland u jooga wadankaasi, Xamse Xaaji Dool.
Waxa iyana xusid mudan Marwo Aamuna oo ah ganacsato wadankaa Uganda ka mida dadka ugu maalqabeensan balse ah maalqabeen u dhashay ama ka soo jeeda somaliland ayaa iyana qayb wayn ka qaadatay hirgalinta booqashada waftiga iyo ka qaybgalka shirka ama kulanada kala duwan ee waftigaasi la yeeshay madaxdii halkaa isugu timid.